हवाई क्षेत्रकालागि के छ बजेटमा : चुहानडाँडा विमानस्थल बन्ला त ? - Khula Patra
हवाई क्षेत्रकालागि के छ बजेटमा : चुहानडाँडा विमानस्थल बन्ला त ?
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ १६, २०७७
प्रकाशित समय: ७:१५:५०
काठमाडौं । सरकारले तेह्रथुमको चुहानडाँडा विमानस्थलकालािग बजेट विनियोजन गरेको भनेपनि सार्वजनिक भने गरेनँ । लामो समयदेखि विमानस्थल निर्माण हुने भन्दै वर्षेनि बजेटमा समेत घोषणा गरिएपनि काम अघि बढेको छैन । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले तेह्रथुमको चुहानडाँडा र दाङको नारायणपुरमा आन्तरिक विमानस्थलको निर्माण कार्य अघि बढाउन आवश्यक रकम विनियोजन गरेको बताए ।
उनले चन्द्रगढी, धनगढी र जनकपुर लगायतका विमास्थलको सुधार तथा स्तरोन्नति गर्न र ट्रंक रुटका विमास्थलको स्तरोन्नति एवम् विस्तार गरी रात्रीकालिन उडान सञ्चालनयोग्य बनाउन बजेट व्यवस्था गरेको बताए । सरकारले कोभिड–१९ का कारण प्रभावित भएको पर्यटन उद्योगलाई पुनरुत्थान गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केन्द्रित भएको छ । आगामी वर्षको बजेटमा पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधारका पुरानै कार्यक्रमलाई जोड दिइएको छ ।
बजेटमार्फत सरकारले कोरोनाबाट प्रभावित कृषि, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग, होटेल, पर्यटनलगायत क्षेत्रलाई ५ प्रतिशतसम्मको सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा दिने भएको छ । एक प्रदेश एक पर्यटकीय गन्तव्य अवधारणा यस वर्ष पनि राखिएको छ । निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा पर्यटनको विकास र प्रवर्द्धन गर्न एक अर्ब २६ करोड बजेट छुट्याइएको छ । हवाई सेवा, होटेल, ट्राभल, रेस्टुरेन्ट, ट्रेकिङ, पर्वतारोहणलगायत सेवा क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्न कर, शुल्क, ब्याजलगायत छुट दिइएको छ ।
हवाई क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सरकारले आन्तरिक हवाई कम्पनीलाई इन्धनमा लाग्दै आएको पूर्वाधार शुल्क हटाएको छ । यसबाट हवाई इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर १० रुपैयाँ घटेको छ । हवाई पूर्वाधारअन्तर्गत अन्तरप्रदेश हवाई सम्पर्क विस्तार गर्न र अन्तराष्ट्रिय हवाई सेवा विस्तारका लागि १९ अर्ब ४२ करोड विनियोजन गरिएको छ । यसमा चालू वर्षबाटै गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन तथा दोस्रो टर्मिनल भवनलगायत थप पूर्वाधार निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने उल्लेख छ ।
त्रिभुवन विमानस्थलको स्तरोन्नति, अन्तराष्ट्रिय टर्मिनल भवनको स्तरोन्नति तथा पोखरा क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको काम सम्पन्न गर्न आवश्यक रकम व्यवस्था गरिएको छ । निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको हवाई क्षेत्रभित्रको बस्ती स्थानान्तरण र परिपथ निर्माण गरिने भएको छ ।